နားခိုရာ: Happy New Year 2009m
Posted by little moon at 11:12 AM
အိမ်း.... Happy 2009 ပါ...တင်ထားတဲ့ပုံက အူတုန်သည်းတုန်ပါလား ကွယ်တို့....
မမကေအိုအမ်.. ဟိုတစ်ခါ မွေးနေ့ပို့စ်တင်ပြီးကတည်းက နားခိုရာ ကြောက်သွားတာ.....ခု မိန်းမ ဆိုတဲ့ စကားလုံး အများကြီးပါလာပြီ..ဟီဟိ
ဆင်ဒဏ်လားရယ် ဘာတုံစရာရှိလို့လဲ၊ tza ကိုအားကြတယ်ပေါ့လေ။
2009 မှာ သုညတွေ ပျောက်နေတယ်နော်။ ရှာမတွေ့ဘူး ခင်ဗျ။ အဟက်... :P
မပီရေ... ဒီမှာ မိန်းမ မိန်းမလို့ ရေးနေတာတွေ များနေပြီိဆိုပဲဗျ။ အဟဟဟ...
Happy New Year Ko Gyi!!